Lenovo Tab2 7/30, Phablet maka 79 Euro | Gam akporosis
Eziokwu bu na obu ezigbo obi uto ije ije n’ime ya Bolọ ndozi Lenovo na MWC2015 nke a na-eme na Barcelona, ​​nke ahụ bụkwa ụlọ ọrụ nwere Motorola, na-ewetara anyị ọtụtụ okwu na-adọrọ mmasị. Karịsịa, elu mma ọnụ, mara mma aghụghọ na ịtụnanya oru nkọwa, ha niile na a ọnụahịa karịa gbanwee.
Nke a bụ ikpe nke Lenovo Tab2 A7 / 30, A dum Phablet na a mara mma ma mara imewe, na ihe karịrị anakwere nkọwa na na ihe karịrị belata ego, ọ bụla ghara imeri na ya nso ebe anyị ga-enwe ike iji nweta ya maka naanị euro 79. Lee, anyị kọwara ya ụdịdị dị ịtụnanya nke Lenovo Tab2 A7 / 30, yana ihe ngosi mbụ anyị nwere na touchdown nke a Lenovo Phablet.
Lenovo Tab2 A7 / 30 Nka na ụzụ nkọwa
Nlereanya Tab2 A7 / 30
Ihuenyo 7 "Ngosiputa Ngosipụta Ngosipụta IPS Wide-View
Mkpebi Pikselụ 1024 x 600
Nhazi Mediatek Quad Core na 1'3 Ghz
Nchekwa ime 8 / 16Gb gbasaa site na oghere MicroSD ruo 32 Gb
Igwefoto n'ihu 0 Mpx
Tlọ Tarsal 2 Mpx na ndekọ HD
Batrị 3250 mAh
Ahịa 79 Lenovo kwadoro na euro
Banyere ahụmahụ anyị na nke a Lenovo Phablet, eziokwu bụ na ntakịrị na anyị nwere ike ịnwale ya na Lenovo nkwụnye nke MWC15, Ọ hapụrụ anyị ezigbo mmetụta dị mma, na-atụle ya mgbe niile na njedebe nke otu ụdị.
Anyị ga-asị, na maka ike ekwentị ọrụ, N'ihi ya aha nke Phablet, Anyị anaghị ahụ ya nke ọma karịa nyere akụkụ nke ọnụ na anyị na-echeta nwere ihe ọ bụla ọzọ na ọ dịghị ihe na-erughị 7 ″ nke ihuenyo. Dabere na echiche nke m na ahụmịhe m na mbụ Galaxy Tab 7 ″ nke bịara n'ahịa, yana nhọrọ nke oku ekwentị gụnyere, ọ na-esiri gị ike ịme mkparịta ụka n'ọnọdụ nwere oke njedebe dị otú ahụ, ewezuga eziokwu na ị ga-abụ isi nke anya niile na i nwere ike na-eche a obere mkpari.
Na nkenke, nke Lenovo Tab2 A7 / 30Ọ bụ ezigbo nhọrọ ịzụta maka ndị ọrụ ahụ niile na-achọ ọnụahịa gam akporo nwere nnukwu ihuenyo nwere ike jikọọ site na data n'ebe ọ bụla ị na-eji kaadị SIM.
Dabere na Lenovo, ụdị a ga na-ere na Spanish n'ókèala Ma ọ ga-enwe nsụgharị abụọ a tụlere na vidiyo ahụ, otu nwere 8 Gb nke nchekwa dị n'ime na nke ọzọ ga-eme ka ikike ahụ dị okpukpu abụọ. Na vidiyo m na-agwa gị otu okwu ahụ siri chefuo ime oghere maka igwefoto azụ, ọ bụ ezie na eziokwu ahụ, nke Lenovo kwadoro, bụ na ọnụ ahụ nwekwara ụdị abụọ, otu nwere igwefoto azụ na nke ọzọ enweghị, ya mere nke ikpe ma ọ bụ mkpuchi na-enweghị oghere maka igwefoto.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Lenovo » Lenovo Tab2 A7 / 30 a Lenovo Phablet nke e gosipụtara na MWC15 maka naanị 79 Euro
RAM expandable ruo 32 Gb site sd slot ??, nke ahụ dị mma, echere m na ị kwesịrị idozi ya
Enwere m ya otu izu, eziokwu agaala m nke ọma, ana m akwado ya ọ bụ ezie na igwefoto ya dị oke ala.
Ọ bụ ezigbo ìgwè, naanị nkọwa ya bụ igwefoto ebe ahụ na arụmọrụ dị mma
Acer Liquid Z520, nzọ nke ọzọ nke ndị na-emepụta Taiwan na ihuenyo 5-anụ ọhịa
ZTE Blade Star 2, smartphone na njikwa olu